Apple oo ku hawlan wax ka qabashada Virus halis ah oo soo wajahay - BBC News Somali
Apple oo ku hawlan wax ka qabashada Virus halis ah oo soo wajahay
29 Nofembar 2017
Image caption Apple waxay sheegtay in ay ku hawlan tahay cillad bixinta arrintan
Shirkadda Apple ayaa sheegtay in ay ku hawlantahay wax ka qabashada Virus halis ah oo galay nidaamka kombuyuutarrada ay soo saartaa ku shaqeeyaan.
Virus-kani wuxu galay nooca ugu dambeeyey ee nidaamka kombuyuutarradeedu ku shaqeeyaan ee la yidhaa MacOS High Sierra, kaas oo Virus-kani fududaynayo in kombuyuutarka qof aan fasax u haysani si sahlan u furan karo oo xataa in ay u fududaanayso in si sahlan loola bixi karo sirta qofka leh iyo amarrada uu qofkaasi ku maamulo kumbuyuutarkiisa.
"waxaanu ku hawlannahay sidii aanu ku adkayn lahayn nidaamka kombuyuutarradu ku shaqeeyaan ee aanu wax uga qaban lahayn arintan" ayay Apple ku tidhi warbixin ay soo saartay.
Shirkadda Apple oo soo saaraysa taleefoonkii ugu casrisanaa ebid
Facebook iyo Google oo ku biiray dacwadda ka dhanka ah amarka Trump
Image caption Arrintan ayaa saamaynaysa hannaankii u dambeeyay ee kombiyuutaradu ku shaqeeyaan
Virus-kan waxa ogaaday ingineer shirkadda u shaqeeya oo Turki ah oo magaciisa la yidhaa Lemi Ergin, waxaanu ku ogaaday mar uu ku qoray erayga "root" meesha loogu talo galay in la geliyo magaca qofka leh kombuyuutarka oo uu halkii lagu qori lahaa furaha lagu gelayo kombuyuutarka aanu waxba ku qorin oo uu ENTER dhawr goor ku dhuftay ka dibna uu ogaaday in uu si dhab yar kombuyuurtarkii ugu furmay.
Ergin ayaa lagu dhaliilay in uu ka talaabsaday xeerarka shaqada ee ku waajibinaya khuburada iyo injineerada kubuyuutarrada in aanay si fudud u faafinin wixii gol daloolooyin ah ee ay arkaan.
Xeerarkaas ayaa faraya khubarada in ay wixii gol daloolo ah ee ay ku arkaan hannaanka kombuyuutarradu ku shaqeeyaan in ay marka hore ku wargeliyaan shirkadda si loo gufeeyo inta aan dadweynaha lagu wargelin.
Hal Laptop oo leh seddax shaashad oo la soo bandhigay
Apple 'waa inay siisaa Ireland €13 oo bilyan'
Dadka reer Hong Kong oo ka dabo dhacay boliis 'halyay' ah
Ergin kama uu jawaabin su'aalahaas oo Twitter-ka lagu weydiiyey, BBC-dana umay suurto gelin in ay isaga la xiriirto.
Shirkadda Aplle ma qiranin mana aysan beenin in arrintan ay ka warqabtay iyo in kale.
Hase yeeshee marka la eego Virus-kani sida uu u fudud yahay oo ay ku sheegeen khubarada kombuyuutarradu ku tirlmaaneen "howler" ayaa noqonaya arrin "weji gabax" ku noqonaysa shirkadda.
Copyright © 2020 BBC. BBC-du kama mas'uul aha waxyaabaha ku qoran bogaggan kale ee debadda. Nidaamka aan ula dhaqanno xidhiidhada baraha debadda.